ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်သုံး အယူအဆလွဲများ
13 Mar 2018 . 5:28 PM
ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့ ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ရှေးလူကြီးသူမစကားတွေကို နားထောင်တာကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ အဘိုးအဘွား၊ အဖေတို့ အမေတို့ခေတ်တုန်းက ခေတ်ကာလအခြေအနေအရကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ တစ်ချို့နည်းတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်တော့တာတွေရှိပါတယ်။
ဟိုးယခင်ကာလတွေတုန်းက အရာရာမှာ ခေတ်မီပစ္စည်းတွေမပေါ်သလို ရောဂါဘယဆိုတာလည်း သိပ်ပြီးမထူပြောတဲ့အတွက် ဒါဖြစ်ရင် ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးက အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ဒါဖြစ်ရင် ဒီလိုလုပ်ပေမယ့် အဆင်ပြေချင်မှပြေတာပါ။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေးဦးသူနာပြုနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အများစုလွဲမှားနေတဲ့ အချက်လေးတွေကိုသိရအောင် ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်တယ်ဆိုရင် လူနာကို ရုတ်တရက်ထူမတ်ပေးတာနဲ့ မချီတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တောင် ကျောရိုးနဲ့အရိုးအဆစ်ထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် လူနာကို ဘာလှုပ်ရှား မှုမှမဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစား သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ ဆေးရုံတို့ကို အကြောင်းကြားပြီး ဆေးရုံကားလာတဲ့အချိန် ကျွမ်းကျင်သူတွေလာတဲ့အချိန်အထိ စောင့်သင့်ပါတယ်။
ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီဟာ ဆေးသောက်ရတာခြင်းတူရင်တောင် အမျိုးအစားတူချင်မှ တူပါတယ်။ တစ်ချို့က ဓာတ်မတည့်တာကြုံရသလို တစ်ချို့ကျတော့ ဆေးမတိုးတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးကို မလိုအပ်ဘဲ သောက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုကိုရယူပြီးမှ ဆေးသောက်သင့်ပါတယ်။
တချို့သံဆူးရင် သံကိုသွေးလိမ်းရတယ်တဲ့။ အခုလည်း ဆီပူလောင်ရင် ဆီလိမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာမှ ဆရာဝန်တွေသိခဲ့ရပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေကတော့ ဒါကို ကတ်ကင်းရိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဆီကဆီပူလောင်ကိုပျောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်သလို ပိုပြီးလည်းဆိုးစေပါတယ်။ တကယ်လို့ဆီပူလောင်ခဲ့ရင် ရေအေးအေးထဲမှာ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်စိမ်ထားပြီး ခြောက်အောင်သုတ်ပြီးမှ ဆေးလိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ကို ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးအနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမှားတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အရက်သောက်မိရင် သွေးကိုပိုထွက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအားနည်းနေတဲ့အချိန် အရက်သောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒဏ်ရာရထားပြီး အရက်ပါသောက်ထားတဲ့ လူအတွက် ဆေးဝါးကုသတဲ့အချိန်မှာ ထိရောက်မှုလည်းနည်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအယူအဆဟာ စွန့်လွှတ်ရမယ့်အယူအဆတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေရာရာမှာ အက်ဆီးဒင့် ဒါမှမဟုတ် ယာဉ်တိုက်မှုတို့ဖြစ်ပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ဘာမှမကူညီနိုင်ရင် ခပ်ဝေးဝေးမှာနေသင့်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု၊ မီးလောင်မှု စသဖြင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်အခြေအနေတွေမှာ သင့်ကိုပါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင် လုံခြုံတဲ့နေရာမှာအရင်နေပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပြီး အကူအညီတောင်းသင့်ပါတယ်။ ကူညီမယ့်သူဟာ ဒုတိယလူနာ မဖြစ်ရေးဟာ အဓိကအရေးကြီးပါတယ်။
ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အရေးပျေါသုံး အယူအဆလှဲမြား
ဈေးသုံးလညျးမလှယျနဲ့ ရှေးထုံးလညျးမပယျနဲ့ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ရှေးလူကွီးသူမစကားတှကေို နားထောငျတာကောငျးပမေယျ့ တဈခါတဈလမှော အဘိုးအဘှား၊ အဖတေို့ အမတေို့ခတျေတုနျးက ခတျေကာလအခွအေနအေရကငျြ့သုံးလာခဲ့တဲ့ တဈခြို့နညျးတှဟော ဒီဘကျခတျေမှာ အံဝငျဂှငျကမြဖွဈတော့တာတှရှေိပါတယျ။
ဟိုးယခငျကာလတှတေုနျးက အရာရာမှာ ခတျေမီပစ်စညျးတှမေပျေါသလို ရောဂါဘယဆိုတာလညျး သိပျပွီးမထူပွောတဲ့အတှကျ ဒါဖွဈရငျ ဒီလိုလုပျရတယျဆိုတာမြိုးက အသုံးဝငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဘကျခတျေမှာတော့ ဒါဖွဈရငျ ဒီလိုလုပျပမေယျ့ အဆငျပွခေငျြမှပွတောပါ။ အထူးသဖွငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ရှေးဦးသူနာပွုနညျးတှနေဲ့ပတျသကျရငျ မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အမြားစုလှဲမှားနတေဲ့ အခကျြလေးတှကေိုသိရအောငျ ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကားအကျဆီးဒငျ့ဖွဈတယျ ဒါမှမဟုတျ ယာဉျမတျောတဆဖွဈတယျဆိုရငျ လူနာကို ရုတျတရကျထူမတျပေးတာနဲ့ မခြီတာမြိုးတှေ မလုပျသငျ့ပါဘူး။ လူနာရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဒဏျရာကွီးကွီးမားမားမတှရေ့ဘူးဆိုရငျတောငျ ကြောရိုးနဲ့အရိုးအဆဈထိခိုကျတာတှေ ဖွဈတတျတာကွောငျ့ လူနာကို ဘာလှုပျရှား မှုမှမဖွဈစသေငျ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား သကျဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးဆေးခနျး၊ ဆေးရုံတို့ကို အကွောငျးကွားပွီး ဆေးရုံကားလာတဲ့အခြိနျ ကြှမျးကငျြသူတှလောတဲ့အခြိနျအထိ စောငျ့သငျ့ပါတယျ။
ရောဂါတဈခုခုဖွဈပွီဆိုရငျ လူတဈဦးခငျြးစီဟာ ဆေးသောကျရတာခွငျးတူရငျတောငျ အမြိုးအစားတူခငျြမှ တူပါတယျ။ တဈခြို့က ဓာတျမတညျ့တာကွုံရသလို တဈခြို့ကတြော့ ဆေးမတိုးတာတှကွေုံရတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆေးကို မလိုအပျဘဲ သောကျတာမြိုးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ ဆရာဝနျညှနျကွားမှုကိုရယူပွီးမှ ဆေးသောကျသငျ့ပါတယျ။
တခြို့သံဆူးရငျ သံကိုသှေးလိမျးရတယျတဲ့။ အခုလညျး ဆီပူလောငျရငျ ဆီလိမျးရတယျဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယှငျးနတေယျဆိုတာ နှဈပေါငျးတျောတျောကွာမှ ဆရာဝနျတှသေိခဲ့ရပါတယျ။ လူကွီးသူမတှကေတော့ ဒါကို ကတျကငျးရိုကျတယျလို့ပွောကွတယျ။ ဆီကဆီပူလောငျကိုပြောကျအောငျမလုပျပေးနိုငျသလို ပိုပွီးလညျးဆိုးစပေါတယျ။ တကယျလို့ဆီပူလောငျခဲ့ရငျ ရအေေးအေးထဲမှာ မိနဈနှဈဆယျခနျ့စိမျထားပွီး ခွောကျအောငျသုတျပွီးမှ ဆေးလိမျးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
အရကျကို ထုံဆေး၊ မဆေ့ေးအနနေဲ့ သုံးလို့ရတယျဆိုတဲ့ အယူအဆမှားတဈခုလညျးရှိပါတယျ။ သှေးထှကျသံယိုဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ အရကျသောကျမိရငျ သှေးကိုပိုထှကျစပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျခံအားနညျးနတေဲ့အခြိနျ အရကျသောကျရငျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အဆိပျအတောကျဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒဏျရာရထားပွီး အရကျပါသောကျထားတဲ့ လူအတှကျ ဆေးဝါးကုသတဲ့အခြိနျမှာ ထိရောကျမှုလညျးနညျးစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအယူအဆဟာ စှနျ့လှတျရမယျ့အယူအဆတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
တဈနရောရာမှာ အကျဆီးဒငျ့ ဒါမှမဟုတျ ယာဉျတိုကျမှုတို့ဖွဈပွီဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ ဘာမှမကူညီနိုငျရငျ ခပျဝေးဝေးမှာနသေငျ့ပါတယျ။ ပေါကျကှဲမှု၊ မီးလောငျမှု စသဖွငျ့ ရုနျးရငျးဆနျခတျအခွအေနတှေမှော သငျ့ကိုပါ အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျကိုယျတိုငျ လုံခွုံတဲ့နရောမှာအရငျနပွေီးမှ သကျဆိုငျရာကိုအကွောငျးကွားပွီး အကူအညီတောငျးသငျ့ပါတယျ။ ကူညီမယျ့သူဟာ ဒုတိယလူနာ မဖွဈရေးဟာ အဓိကအရေးကွီးပါတယျ။
by Ju Jue . 10 mins ago
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆရာ (World’s Best Teacher) ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်ဆရာမ Andria Zafirakou
by Kyaw Soe Aung . 17 hours ago
အကောင်းဆုံး Eyebrow Pencil လေးများ
by redrose . 18 hours ago
တတိယအကြိမ်မြောက် သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပူတင် (Putin)
by Kyaw Soe Aung . 18 hours ago
သူငယ်ချင်းကောင်းမှန်ရင် ဒါမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး
Android စမတ်ဖုန်းဝယ်ပြီးတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်သင့်သည့် အချက် ၂ချက်
Five Star Hotel ကြီးရဲ့ လူတိုင်းစားနိုင်မယ့်ဈေးနဲ့ အမိုက်စား Seafood Buffet